कर्निंग गोरिल्ला ग्लासको साथ पहिलो फोन ओप्पो | Androidsis
यो १० बर्ष भयो जब कोर्निंगले आफ्नो पहिलो उच्च-शक्ति सामग्री परिचय गरायो खासगरी टेलिफोनको लागि। त्यसबेलादेखि कम्पनीले यसको पहिरनकर्तालाई बढी प्रतिरोध क्षमता प्रदान गर्न विकसित गर्दैछ। यसको प्रमाणको रूपमा, हामीलाई नयाँ कर्निंग गोरिल्ला ग्लास brings ल्याउँछ.
कारनिंगले घोषणा गर्‍यो कि एक आउँदै गरेको उपकरण बोक्ने छ, र यो, केहि छैन र केही पनि कम छैन, ओप्पो। यस फोन निर्माताले हामीलाई यस उच्च-प्रतिरोध गिलासको साथ मोबाइल ल्याउने पहिलो हुनेछ।
यस घोषणाबाट, अफवाह छ कि यो छ Oppo F9 वा को R17 तिनीहरू पर्खिरहेका छैनन्। यद्यपि यी फोनहरू मात्र ती हुन् जसलाई एशियाली कम्पनीले चाँडै घोषणा गर्न लाग्ने छ, हामी यसलाई अस्वीकार गर्दैनौं कि अर्को मोडेलले यसलाई बोक्दछ। अर्कोतर्फ, यो उच्च प्रतिरोध क्रिस्टलको आगमन यसै वर्षको लागि निर्धारित गरिएको थियो। तेस पछि, अन्य स्मार्टफोन निर्माताहरूले यसलाई उनीहरूको टर्मिनलमा कार्यान्वयन गर्ने छन्.
कम्पनीहरूले आफ्नो सम्बन्धको पुष्टि र मद्दत पुर्‍यायो। यहाँ एशियाई ब्रान्डका उपाध्यक्षका शब्दहरू छन्:
ओप्पो र कर्निंगले सधैं नजिकको सम्बन्ध कायम राख्यो जुन ओप्पो स्मार्टफोनको बहु संस्करणहरूमा उपभोक्ताहरूको लागि उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव सक्षम पारिएको छ। हामी हाम्रो अर्को स्मार्टफोनमा गोरिल्ला ग्लास adop अपनाउने पहिलो हुन पाउँदा उत्साहित छौं, र हामी विश्वास गर्छौं कि विश्वभरका उपभोक्ताहरूले अभूतपूर्व अनुभवको आनन्द उठाउनेछन्।
एंडी वू, OPPO का उपाध्यक्ष।
पत्ता लगाउनू: सामसुले आफ्नै अनब्रेकेबल स्क्रीन प्रस्तुत गर्दछ
अन्तमा, गोरिल्ला ग्लास glass गिलासको विशेषताहरु को बारेमा, यस सामग्रीको प्रतिरोध यसको पूर्ववर्तीको तुलनामा बढाइएको छ। यो १ मिटर उचाईबाट १ falls ओरालोसम्म प्रतिरोध गर्न सक्षम छ, प्रयोगशालामा गरिएको विभिन्न परीक्षण अनुसार। यस कारणले गर्दा, यो भविष्यमा अधिक असभ्य उपकरणहरूमा लागू गरिने छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » ओप्पो पहिलो कम्पनी हुनेछ जसले हामीलाई कर्निंग गोरिल्ला ग्लास with को साथ मोबाइल ल्याउने छ